Malezia: Novan’i Yuna endrika ny mozika Indie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2009 15:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, English
Miroborobo ny fampisehoana mozika tsy miankina ao Malezia. Taona vitsivitsy lasa izay, dia miha-maro ireo mpanakanto mamelon-tena sy ireo tarika mahazo fankasitrahana avy amin’ireo tranonkalam-pifandraisana toy ny YouTube sy ny MySpace.
Fantaro i Yuna. Mety hihevitra ianao fa tanora Maleziana toy ny rehetra ihany i Yuna, nefa raha manopy maso ny boky firaketany (na ny mombamomba azy ao anatin’ny MySpace calendar?), dia manana lisitr’ireo fampisehoana miandry azy atsy ho atsy sy efa manomboka ny fandraisam-peo voalohany (EP) hanaovany dokam-barotra izy , izay ny trano fandraisam-peo Yuna azy tenany ihany no mamokatra azy. Resahana betsaka eo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy izy, tsy noho ny famokarany mozika goavana ihany fa noho ny sariny mahafatifaty indrindra koa. Manaitra izy, amin’ny saina madio, teo amin’ny sehatry ny mozika indie noho ny fiakanjoany ny tundung, sy saly afatotra amina loha izay fanaon’ny vehivavy any Malezia. Manarona ny loha izy ity fa tsy ny tarehy. Toy ny hijab izy io, fitondran'ny vehivavy silamo any amin'ny faritra hafa, indrindra fa ry zareo avy any Afovoany Atsinanana.
Omen’i Nat Nat ny fivoaran’ny fiakaran'ny lazan'i Yuna:
Tsy dia mbola fanta-daza loatra izy tany am-boalohany, nefa nahasarika ny maro tamin’ny alalan’ny hira andrana voalohany nataony, nandeha tamin’ny iray amin’ireo fampielezampeo sangany tao Malezia ny Dan Sebenarnya. Fotoana fohy tato aoriana, maro tamin'ireo fampielezam-peo no nanomboka nandefa ny hirany. Nanjary fandre matetika tamin'ny fomba ofisialy izy.
Miezaka manome ny fomba fijeriny tsy mitongilana momba ny mozikan’i Yuna i Lin Loves:
Mpihira goavana izy, na dia ilay zalahy teo amin’ny fandoavam-bola aza dia nilaza toy izany, ary tsara vintana tokoa aho nahazo ny rakikira farany tao am-pivarotana. Ambarako aminao fa raha vao nandre voalohany azy aho dia vaky volana hoe: “Dray! tena mahay mihira mihitsy izany tovovavy izany, tiako be ny feony sy ny mozikany.” Avy eo anefa somary naka bahana kely aho hisaintsaina hoe sao dia mitsara azy ivelany fotsiny noho ny fisalorany hijab aho, ary tsapako fa mety hampitongilana ihany ny fijeriko izany. Noho izany dia niezaka ny tsy hitongilana araka izay tratrako aho ary nihevitra fa tena goavana tokoa izy.
Zendana tamin'ny sarin’i Yuna i Indra saingy tiany kosa ny feon’i Yuna izay toy ny an'i Norah Jones:
Nijery ny mikasika azy tao amin’ny MySpace aho ary ny nanaitra ahy dia izy miakanjo tudung! Fatratra tokoa izy, amin'io feony mitovy amin'ny an'i Norah Jones io dia tena ho lasa lavitra mihitsy izy (araka ny fahaizako azy, tsapako any anatiko any fotsiny izany). Milantolanto malefaka, izany ny hiran’i Yuna. Andramo dia henoy anie ny hirany e, tsy mitovy ny lantom-peony rehefa mihira sy miresaka amin'ny teny anglisy izy. Raha miresaka izy, miteny toy ny Maleziana, saingy rehefa mihira ka mampiakatra ny lantom-peony, eo indrindra ny feony no maneno toy ny feona vehivavy Anglisy.
Miarahaba ny sarin’i Yuna i The Baju Kurung Adventure ary azo alaina ho fakàna tsirin-kevitra ho an’ny maro:
[Yuna] dia Mpihira/mpamoron-kira indie izay namoaka EP iray monja. Ambarako anao marina fa tena avo lenta daholo ny hirany. Tsy mbola nanatrika ny seho an-tsehatra nataony aho , fa efa nisintona kosa ny hirany sy nijery azy tao amin’ny YouTube, ary ny nampivanitika ahy dia izy niakanjo hijab, izay tsy mahazatra loatra ny tovovavy indie, tsirin-kevitra iray io. Andanin'izay, na hijab na tsia, manan-talenta ikala. Izay no tena zava-dehibe.
Ankafizin'ireo hafa firazanana ao amin'ny firenena ihany koa i Yuna. Taitra i Tragic. Fairy. Tales. raha nahalala ny firazanan’i Yuna:
Nangataka tamiko ity mpihira Indie vaovao Yuna ity ny anabaviko. Taitra aho raha nahalala fa hay Maley izy io. (Tsy hoe mpanavakavaka ara-pirazanana aho akory) Eny e, tsy azoko lavina fa manana feo miavaka tokoa ikala na dia tsy izy aza no tena manja indrindra eto amin'ny tanàna ary tsy araka izay nieritreretako azy velively. Raha ny hevitro manokana, mila mpihira tahaka azy ny sehatry ny mozika anatiny eto amintsika.
Toy ny areti-mifindra ny hirany ka nahatonga mpitoraka blaogy maro hanapa-kevitra hampiasa azy ho mozika lafika mba handrotsirotsiana ny mpamaky azy ireo. Hoy ny nosoratan'i Boundless Promise:
Fantatrao va re ny hira henonao eto amin'ny blaogiko izao e?. Deeper Conversation no lohateniny ary sanganasan'i YUNA, Indie iray mpihira. Tena marina mafy e!, manan-talenta izy ary ny hirany rehetra sy ny feony dia samy FATRATRA avokoa!!! Ary dia izy daholo ihany no sady manoratra no mandrindra azy rehetra. 22 taona izy ary mitafy tudung ary mihira any Londona ankehitriny.
Mba hisy va re indray andro any fotoana hiresahan'ny olona ny mozikan'i Yuna fotsiny, fa tsy ny sariny e?